Nhau - Girazi rakadzikama, Zvakanakira uye Zvakaipa, Munoziva Mese?
Yakapfava Girazi, Zvayo Zvakanakira Nezvazvakaipira, Iwe Mese Unoziva?
Girazi rakapfava rudzi rwegirazi rekuchengetedza. Muchokwadi, irwowo rudzi rwegirazi rakadzivirirwa. Kuti uwedzere kusimba kwegirazi, chemakemikari kana nzira dzomuviri dzinowanzo shandiswa kugadzira kushushikana kwepamusoro pegirazi. Kana girazi rikaiswa pasi pechisimba zvekunze, kushushikana kwepamusoro kunotanga kukanganiswa, nekudaro kunatsiridza kugona uye kusimudzira kusagadzikana kwemhepo kwegirazi chairo. Bonde, kutonhora uye kupisa, kuvhunduka uye zvichingodaro.
Girazi rakapfava inzira iyo yepamusoro girazi rinoyangarara rinopisa padyo nekwanyorovera, uye girazi pamusoro rakakurumidza kutonhodzwa, kuitira kuti kushushikana kwekumanikidza kugovaniswe pagirazi pamusoro, uye kushushikana kwakasimba kuri pakati pepakati. Nekuda kwekumanikidza kwakasimba kwakaenzana, kushushikana kwakasimba kunoitwa nekumanikidza kwekunze kunogadziriswa nekumanikidza kwakasimba kwegirazi, nokudaro nekuwedzera kuchengetedzeka kwegirazi.
Girazi rakadzikama rine zvinotevera hunhu:
1. Simba: Iyo michina simba, kukanganisa kusagadzikana uye kukotama kwesimba regirazi mushure mekutsamwa kunogona kusvika nguva 4-5 iyo yegirazi yakajairwa.
2. kugadzikana kwetembiricha kunovandudzwa: girazi rakadzikama rinogona kumira musiyano mukuru wekupisa pasina kukuvara, uye kupokana nemusiyano wekupisa kwakapetwa katatu kupfuura kweyakajairika girazi reiyo pakukora. Inogona kumira tembiricha shanduko yemakumi mashanu neshanu C, ine mhedzisiro yekudzivirira kupisa kupisa.
3.Kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa: Mushure megirazi rakadzikama raparadzwa, rinokurumidza kuratidza zvidiki zvebundu-kona, zvobva zvawedzera kuchengetedzeka kwemunhu. Mafomu: Fenicha, zvemagetsi uye emagetsi indasitiri, kuvaka, kushongedza indasitiri, dzimba dzekugezera, mota, zvinokwira, uye dzimwe nzvimbo uko kuchengetedzeka uye tembiricha misiyano inonyanya kudikanwa, uye inogona kushandiswa seyepakutanga firimu rekudzivirira girazi uye girazi rakavezwa.
Zvishandiso: Flat simbi uye yakakombama yakanyorova girazi ndezvekuchengetedza girazi. Inoshandiswa zvakanyanya mumashure ekumusoro-soro ekuvaka nemahwindo, girazi keteni masvingo, girazi remukati, girazi remwenje, kuona nzvimbo yekusimudza, fenicha, magirazi ekuchengetedza uye zvichingodaro.
Kukanganisa nekushomeka kwegirazi rakadzikama:
1. Mushure mekunge girazi rakadzikama risingachagone kugadziriswa, girazi rinongogadziriswa kune saizi inodiwa uye chimiro isati yashatirwa, uyezve yadzikama.
2. Kunyangwe hazvo simba regirazi rakadzikama rakasimba kupfuura iro regirazi rakajairika, girazi rakadzikama rine mukana wekuzvidzora (kuzvipwanya) kana musiyano wekupisa uchichinja zvakanyanya, uye girazi rakajairika harina mukana wekuputika.
Mushure mekudzikama kwegirazi, simba remuchina regirazi repamusoro rakapetwa ka3 kusvika ku5 pane iro girazi rakajairika, asi makona egirazi rakapfava haana kusimba uye anogona kutyoka mushure mekuiswa kumasimba ekunze. Uye zvakare, kana tembiricha yekunze ikachinja kazhinji, girazi rakadzikama rinogona kuzviputikawo.
Masuwo uye mahwindo epositi echinyakare mhumhi inoyeuchidza munhu wese kuti kana uchishandisa yakanyorovera zvigadzirwa zvegirazi, chenjera kuti usarovera pamakona. Zvinokurudzirwa kuti usaite tembiricha yegirazi ichichinja zvakanyanya munguva pfupi yekudzivirira kuzviputika. Uye zvakare, iyo yepakati chikamu cheiyo yakadzikama girazi ndiyo yakasimba, uye makona mana uye mativi ndiwo asina kusimba.
Kana paine chimbichimbi, girazi rakadzikama rinogona kuputswa ndokutiza. Nzira yakanakisa ndeye kurova kumicheto nemakona egirazi ine nyundo yekuchengetedza kana mamwe mapundu akapinza, kunyanya pakati pemucheto wepamusoro wegirazi. Kana iyo girazi rave nekutsemuka, zviri nyore kupwanya girazi rese.